Alahady – 02/11/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady – 02/11/2014 – Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Boky faharoan’i Makabeo (2 Mak 12, 43-45)
Valisoa tsara indrindra no voatahiry ho an’ireo nody mandry tamim-pitiavam-bavaka.
Tamin’izany andro izany, nampanao vokatra i Jodasa filohan’i Israely, ka nahavory drakma roa arivo nampanateriny hanaovana sorona fanonerana any Jerosalema. Asa soa sy mendrika, avy amin’ny fiheverana ny fitsanganan-ko velona izany. Satria, raha tsy mino izy fa tsy maintsy hitsangan-ko velona ny miaramila maty an’ady, dia zava-poana sy tsy misy antony ny mivavaka ho an’ny maty. Noheveriny koa fa valisoa tsara indrindra no voatahiry ho an’izay mody mandry amim-pitiavam-bavaka, ka hevitra masina ombam-pitiavam-bavaka izany. Izany no nanaovany an’izany sorona fanonerana izany ho an’ny maty, mba ho afaka amin’ny fahotany izy ireo.
Vakiteny faha-2: Taratasy faharoan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (2 Kôr 5, 1. 6-10)
Manan-trano haharitra mandrakizay any an-danitra isika.
Ry kristianina havana, fantatray fa rehefa rava ity trano lay itoeranay eto an-tany ity, manan-trano tsy nataon-tànan’olona, fa narafitr’Andriamanitra izahay, dia trano haharitra mandrakizay any an-danitra. Koa noho izahay manana mandrakariva izany toky izany, sady mahalala fa lavitra ny Tompo izahay raha mbola mitoetra amin’ny vatana(satria finoana moa no andehanantsika, fa tsy fahitana), dia izany toky izany no itiavanay kokoa ny miala amin’ny vatana, mba hitoetra eo akaikin’ny Tompo. Ary izany ihany koa no ikelezanay aina mba hankasitrahan’ny Tompo, na mitoetra amin’ny vatana izahay na miala aminy. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy hiseho amin’ny fitsaran’i Kristy mba handraisantsika tsirairay avy izay tandrifin’ny asantsika fony mbola tao amin’ny vatana, na soa izany na ratsy .
Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 14, 1-6)
Misy fitoerana maro ao an-tranon’ny Raiko.
Tamin’izany andro izany, i Jesoa niteny tamin’ny mpianany nanao hoe: “Aoka tsy hitebiteby ny fonareo. Mino an’Andriamanitra ianareo, ka minoa ahy koa. Misy fitoerana maro ao an-tranon’ny Raiko; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho; fa handeha Aho hanamboatra fitoerana ho anareo, ary rehefa lasa Aho ka voavoatra ny fitoerana ho anareo, dia ho avy indray Aho haka anareo ho any amiko, dia izay itoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin’izay alehako”. Dia hoy i Tômà taminy: “Tsy fantatray izay alehanao, Tompoko, ka ahoana no hahafantaranay ny lalana?” Ary hoy i Jesoa taminy: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako”.